Noely 2017 : Niraisana ny hafaliana fa tsy nitovy ny fankalazana | NewsMada
Par Reflets sur 26/12/2017
Amin’ny ankapobeny, mahazo tombony kokoa ny zaza sy ny ankizy ary ireo kilonga madinika amin’ny vanim-potoan’ny Noely tahaka izao. Na izany aza, tsy diso anjara ihany koa ny lehibe… Samy mifaly ! Niezaka ny nanao izany avokoa ny rehetra. Niezaka nampifanaraka ihany koa ny fifaliana tamin’ny teo am-pelatanana. Tazana tamin’ny tranga nisy tetsy sy teroa izany…
: Ny 24 desambra mialoha ny andro Krismasy, nifanitsakitro ny mpiantsena. Zara raha nihetsika ny fiara… Ny sasakalina kosa, nampiseho ny talentany tany anivon’ny fiangonana ny ankizy. Anisan’ireny ny teny amin’ny FJKM Ambohitantely.
Krismasy, feno hipoka avokoa ny fiangonana. Anglikana Santa Laurent Ambohimanoro, Katedraly Andohalo, sns. Nahitana fampirantiana sary ny tetsy amin’ny FJKM Tranovato Faravohitra.
Toy ny isan-taona, nanatontosa seho an-tsehatra ny eo anivon’ny sekoly alahady…
Nanakoako ny hira sy ny tsianjery. Tao ihany koa ny dihy!
Tao amin’ny Maternité Befelatanana, iray amin’ireo zaza teraka tamin’ny fanamarihana ny Noely 2017 i Andriananonitra Fitia. Tamin’ny 1 ora maraina katroka izy no teraka.
Vanim-potoana lehibe ho an’ny ankizy ny Noely. Somary hasiana fahatsiarovana kely miaraka amin’ny Dadabe Noely. Mahazo ny anjarany ihany koa ny mpaka sary. Fitia mifamaly e !
: Ny fety mandeha… Ny varotra ihany koa mandeha !… « Tsia, tsy marina izany », hoy ny mpivarotra sasany. Ny mpivarotra no tsy maintsy mandeha fa ny varotra ataony maisatra fa tsy manam-bola ny olona !
Nanatontosa: Fanou sy Mamiherison ary HaRy R.